Xukuumada Soomaaliya Oo Sheegtay In aysan U Dul Qaadanayn Ajaanibta Al-Shabaab (Warsaxaafadeed) | RBC Radio	Home
Friday, January 4th, 2013 at 12:46 am	/ 11 Comments Wednesday, January 9th, 2013 at 02:30 pm Xukuumada Soomaaliya Oo Sheegtay In aysan U Dul Qaadanayn Ajaanibta Al-Shabaab (Warsaxaafadeed)
Muqdishoi (RBC Radio) Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo ay wehliyaan Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay oo Arbaco ah u safray Dalka Kenya si uu ula kulmo Wasiirka difaaca dalkaasi.
Mudane C/xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi wasiirka Difaaca Soomaaliya ayaa ujeedada socdaalkiisu yahay sidii la isaga kaashan lahaa Howlgallada ay AMISOM iyo Ciidamada Xoogga dalka uga xureynayaan cadowga guud ahaan wadanka, ,horumarinta tababarrada ciidamada xoogga dalka iyo qaabkii dib u dhis ballaaran loogu sameyn lahaa ciidamada XDS.
“Muhiimadda ugu weyn ee safarkeyga waxa ay tahay in la dardar geliyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga Gobollada ay ku suganyihiin kooxda Al qaacidada Soomaaliya ee al shabaab”.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in aan marnaba aysan Wasaaradda Gaashaandhiggu u dulqaadan doonin in Ajnabi dambiile ah uu kusii sugnaado wadanka gudihiisa kana shaqeeyo dhibaateynta shacbiga, isagoo ugu baaqay ajaaniibta ka barbar dagaalanta Al-Shabab in ay isaga baxaan Guud ahaan dalka inta aysan ciidamada Xoogga dalka gacanta ku dhigin.
“Dhallinyarada ay qaldeen Shabaab waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa’iideystaan fursadda ay haystaan maanta oo ah in ay isasoo dhiibaan kana towba keenaan Dambiyadii ay ka galeen Bulshada cafisna ay weydiistaan waad ogtihiin maanta Al shabaab wey jabeen mana lahan awood ay isaga difaaci karaan Ciidamada geesiyaasha ah ee DF iyo AMISOM” ayuu yiri Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya C/xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi.
2 Responses for “Xukuumada Soomaaliya Oo Sheegtay In aysan U Dul Qaadanayn Ajaanibta Al-Shabaab (Warsaxaafadeed)”
Qufaaye says:	January 9, 2013 at 4:16 pm	Gaalo raacyada waxaan ku nacay nacnacda iyo ha lagu maqlo. War muxuu u digaa isaga ayaa baabuur shabaqle ah gaal calooshiis u shaqeyste uu ku wadaaye.
Ajaaniinba ma Africanka calooshood u shaqeystayaasha miyaa, mise labada xabo ee muslimka inoo soo gurmaday ayuu ka hadlayaa?
Ali soomali says:	January 9, 2013 at 7:09 pm	@qufaaye, bilaayo kuu soo gurmatay -ma nimanka dalkooda dembiyaal ka ah una quuri waayey inay dalkooda ka dagalaaman una yimid soomalia inay dowladnimo seegiyaan, ungana dhaartay soomalida nasiinyo iyo nabad, caruurtii soomaliyeedna u diiday waxbarasho kuna xiray bambo si ehelkooda ay isgu qarxiyaan nimanka noocaas ku sifoobay baad ku tilmaantay niman noo soo gurmaday.
Abuu Mansuur Al-Amriiki Oo Al-qaacida Ka Codsaday Iney Al-shabaab Ka Badbaadiyaan
Xukuumada Soomaaliya Oo Faah Faahin Ka Bixisay Kulan Looga Hadlayay Howlgalka AMISOM Oo Muqdisho Ka Dhacay
Xukuumada Soomaaliya Oo Sheegtay Inuu Xiriirka Ka Dhaxeeyo Bucadbadeeda Iyo Al-Qaacida
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Sheegay Inuu Dib U Dhis Ku Bilaabi Doono Wadooyinka Muqdisho